नेपाली मेलाको सन्देश
तमुधिं यूकेको आयोजनामा नेपाली मेला सम्पन्न मात्र भएको छैन, उल्लासमय, भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । नवौं नेपाली मेला विगतको तुलनामा बढी जनसहभागिता र भव्यताका बीच सम्पन्न हुनुले बेलायतवासी नेपालीहरुबीचको एकता, भाइचारा र भावनात्मक एकतालाई पुनर्पुष्टि समेत गरेको छ । नेपालीहरुबीचको एकतालाई कायम राख्नका लागि पनि नेपाली मेला जस्तो कार्यक्रमहरु सँगसँगै अगाडि बढाउन जरुरी समेत छ ।
नेपाली मेलामा नेपालीहरु भेला मात्र भएनन् । नेपाली मेलाले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश समेत प्रवाह गरेको छ । त्यो सन्देश बेलायतका लागि पनि हो र नेपालका लागि पनि । एकातिर नेपालीहरु आफ्नो कला, संस्कृति र संस्कारको रक्षाका लागि कति गम्भीर छ भन्ने कुराको सन्देश दिएको छ भने अर्कोतिर नेपालीहरुबीच एकता छ, नेपालीहरु एकापसमा सँगै रहेर भावना साट्नसक्छन् भन्ने कुराको सन्देश प्रवाह गरेकै छ । यो नेपालीहरुबीचको एकताले बेलायतलाई पनि सन्देश दिएकै छ ।
त्यसो त नेपाल सरकारका लागि गतिलो सबक सिकाएको छ । नेपालीहरु विश्वको जुन कुनामा रहेपनि आफ्नो मौलिकताको रक्षाका लागि हरदम प्रयासरत छन्, गम्भीर छन् भन्ने कुराको सन्देश दिएको छ । नेपालमा रहेका विभिन्न सांस्कृतिक अवयवहरुको रक्षाका लागि सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको कुरालाई समेत एकपटक झकझक्याएको छ । यो अन्यन्त सकारात्मक पाटो हो ।
बेलायतको लण्डनस्थित केम्प्टन पार्कमा को जनजाति, को बाहुन, को महिला, को पुरुष ? को युवा, को बृद्धवृद्धा ? सबैको सामूहिक मनोरञ्जनको थलो बन्यो नेपाली मेला । यो मेला सबैका लागि सिक्ने र सिकाउने महत्वपूर्ण चाड जस्तै बन्दै आएको छ । युवाहरुका लागि आफ्नो संस्कृति, कला र ज्ञान, भेषभूषाका केही अंश भएपनि सिक्ने मौका हो यो मेला । पुराना पुस्ताका लागि नयाँ पुस्तालाई केही सिकाउने अवसर हो यो मेला । त्यसैले पनि यो मेलाको आवश्यकता र औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउने कुनै ठाउँ नै छैन । यो मेलाको मौलिकता आफैमा विशिष्ट छ । यो मेलाको भव्यताले पनि यो कुराको पुष्टि गरिसकेको छ ।
अझ यो मेलालाई युवासँग जोड्न जरुरी देखिन्छ । यो मेलामा युवा सहभागिता बढाउन आवश्यक देखिएको छ । यो मेलालाई निरन्तर र उद्देश्य अनुसारको सार्थक बनाउने हो भने पक्कै पनि युवा केन्द्रीत कार्यक्रममा जोड दिनैपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने मात्र युवाले आगामी दिनमा मेलालाई निरन्तरता दिन सक्दछ । युवाले मेलाको सन्देश गैरनेपालीबीचमा समेत प्रवाह गर्न सक्दछ । त्यसो हुँदा मेलाको भव्यता समेत बढ्नेछ र मेलाले निरन्तरता र भव्यता प्राप्त गर्दछ । यसतर्फ आयोजकको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।